ဒူဒူကြီး: Fire Detection System
SOLAS regulation Chapter II-2, Construction - Fire protection, detection, extinction, Regulation 7.5.1 မှာတော့၊ accommodation spacesတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ stair ways, corridors နဲ့ escape routes တွေမှာ၊ smoke detectors တွေကိုတတ်ဆင်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Regulation 7.5.2,. 7.5.3, 5.4, နဲ့ Regulation6မှာလည်း၊ သဘေ်ာအမျိုးအစားအလိုက်၊ တတ်ဆင် ရမယ့် နေရာတွေကို၊ ဖော်ပြထားသလို၊ Regulation7မှာတော့၊ Manually operated call points တွေကို၊ တခု နဲ့ တခု မီတာ (၂၀) အကွာအဝေးထက် မပိုပဲ၊ တတ်ဆင်ရမယ်လို့ ယေဘုယျ သဘောမျိုး ဖော်ပြထား ပါတယ်။
သဘေ်ာပေါါက Fire Detection နဲ့ Fire Protection အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်၊ အကောင်းဆုံး ကိုးကားစရာ ကတော့ FSS Code လို့ခေါါတဲ့၊ International Code for Fire Safety Systems ပဲဖြစ်ပါတယ်။ FSS Code ဟာ၊ IMO ရဲ့ SOLAS Regulation, Chapter II-2, 1974 Convension ရဲ့ Fire safety system & equipment required အရ၊ Marine Safety Committe မှ၊ ပြဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
FSS Code ရဲ့ Chapter9- Fixed fire detection and fire alarm system ရဲ့ Regulation.2, Engineering specifications, Sub-title 2.2 မှာ Fire detection system အတွက်၊ normal power supply ရော၊ emergency power supply ကိုပါ သီးသန့် ဆက်သွယ်အသုံးပြုရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ Sub title 2.3 မှာတော့ Detectors တွေနဲ့ ပက်သက် တဲ့ Component requirements အပိုင်းကို၊ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Sub title 2.3.1.2 မှာတတ်ဆင်အသုံးပြုမယ့် smoke detectors တွေဟာ၊ မီးလောင်တဲ့အခါ smoke density 12.5 % obstruration per meter ထက်မကျော်ခင်မှာ acitavted ဖြစ်ရမယ်လို့၊ သတ်မှတ် ထားသလို၊ Heat detectors တွေနဲ့ ပက်သက်လို့ Sub title 2.3.1.3 မှာ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ROR heat detectors တွေဟာ၊ 1 Deg. C per minutes နှုံးထက် မပိုတဲ့ temperature ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို detect လုပ်နိုင် ရမှာဖြစ်သလို၊ Rate compensated heat detectors တွေကတော့ မီးလောင်တဲ့အခါ၊ ambient temperature ဟာ၊ 54 °C မရောက်ခင် တနည်းအားဖြင့် alarm activated temperature ဟာ၊ 54 °C ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
maximum floor area အနေနဲ့ Smoke detector တွေကို၊ ၃၇ စတုရန်းမီတာဧရိယာတိုင်းမှာ တလုံးကျစီ တတ်ဆင်ဖို့ နဲ့ Heat detector တွေကို ၇၄ စတုရန်းမီတာဧရိယာတိုင်းမှာ၊ တလုံးကျစီတတ်ဆင်ဖို့၊ maximun distance အကွာအဝေးအနေနဲ့ smoke detector တွေမှာ၊ တလုံးနဲ့ တလုံး ၉ မီတာထက် မပိုတဲ့အကွာအဝေး နဲ့ heat detector တွေမှာ၊ ၁၁ မီတာထက် မပိုတဲ့အကွာအဝေး နဲ့ တတ်ဆင်ဖို့ Sub title 2.4.2.2 မှာ Position of detectors ဆိုပြီးပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဲဒီ Sub title မှာပဲ maximum distance away from bulkheads ဆိုပြီး၊ Smoke detector တွေ တတ်ဆင်တဲ့ အခါ နံရံနဲ့ အများဆုံး ၄ မီတာခွဲ နဲ့ Head detectors တွေတတ်ဆင် တဲ့အခါ၊ နံရံနဲ့ အများဆုံး ၅ မီတာခွဲ သာကွာရမယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
Fire detection & Prevention System ဟာ၊ Safety Equipments အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာမို့၊ International Convention For the Safety Of Life At Sea, 1974 as modifield by Protocol of 1988 အရ၊ Classification Societies တွေက ထုတ်ပေးရတဲ့၊ သက်သေခံလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Safety Equipment Certificate နဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
Safety Equipment Certificate နောက်ဆက်တွဲ၊ Form "E" ဆိုတဲ့ Classed approved Safety Equipment Check List ဆိုတဲ့စာရင်းမှာ၊ ထည့်သွင်း ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်။ Safety Equipment Certificate နဲ့ အကျုံးဝင်တာမို့၊ Safety Equipment Survey တိုင်းမှာစစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။
SOLAS Chapter II-2, Part E - Operational requirements အပိုင်းမှ၊ Regulation 14 - Operational readiness and maintenance မှာ၊ Regulation 14.1.1 မှာ fire protection systems တွေနဲ့ fire-fighting systems/ fire protection systems တွေကို၊ ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းခြင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ အချိန် မရွေး အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာရှိနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက် ထားဖို့ပြဌာန်းထားသလို၊ Regulation 14.1.2 မှာ၊ ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် IMO မှပြဌာန်းထားတဲ့ Insternational Safety Management ISM Code အရ၊ Cretical Equipment အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Critical Equipment ဖြစ်တာမို့၊ ISM Audit နဲ့လည်း၊ အကျုံးဝင်ပြီး၊ SMM Safety Managememt Manual မှာပြဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း၊ Fire detection & Prevention System တွေကို၊ ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းခြင်း၊ အစရှိတဲ့ regular inspection & maintenance တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ၊ စစ်ဆေး လေ့ရှိပါတယ်။
အလားတူပဲ machniery space တွေဖြစ်တဲ့၊ engine room lower platform, engine room middle platform နဲ့ engine room upper platform အစရှိတဲ့၊ အထပ်တွေကိုလည်း၊ zone တခုစီ အဖြစ်ခွဲခြား သတ်မှတ်ကာ၊ smoke detector, heat detectors, flame detectors တွေနဲ့ manually call points တွေ ကို၊ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Accommodation ကိုလည်း၊ main deck, poop deck, upper deck နဲ့ bridge/ wheel house အစရှိသည်ဖြင့်၊ အထပ်တွေ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသလို၊ အထပ်တိုင်းကိုလည်း zone တခုစီ အဖြစ်ခွဲခြား သတ်မှတ်ကာ၊ stair ways, corridors နဲ့ escape routes တွေမှာ၊ smoke detector, heat detectors, flame detectors တွေနဲ့ manually call points တွေကို၊ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
တခါတရံမှာ accomodation မှ၊ crew cabins တွေမှာပါ၊ fire detectors တွေကိုတတ်ဆင်ထားတာ မျိုးတွေ့ရသလို၊ များသောအားဖြင့် accomodation မှာရှိတဲ့ emergency generator room နဲ့ battery room တွေမှာလည်း၊ fire detectors တွေကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် steering gear room, bow thruster room, paint store, bosun store နဲ့ tanker တွေမှာဆို၊ pump room အစရှိတဲ့ machinery spaces နေရာတွေနဲ့ compartment တွေမှာလည်း၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Image Credits to : http://wn.com,
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:35